Uthando lwemfuyo kowesifazane osemncane lugcine lumenze ukuthi azitholele ipulazi elithi yena. UNOKWANDA NCWANE uxoxe naye | Umbele
UNksz uValashiya, oneminyaka ewu-21, uzalelwe eMatatiele, eMpumalanga Kapa, kodwa ukhulele eKokstad, eKZN. Akazibekile phansi ekutholeni ulwazi lokuphatha ibhizinisi njengoba enza unyaka wesibili kwiBusiness Information Management eDurban University of Technology.
Elanda ngothando lwakhe lwemfuyo, uthe: “Kusukela ebuncaneni bami ngangifisa ukuba wumlimi, ngibe nepulazi lami. Ekhaya bavame ukungikhumbuza ukuthi kusukela ngineminyaka emithathu bengiphatha ibhakede lami elincane uma kuyosengwa futhi ngithanda nokuhlala nabafana esibayeni nami ngenza lokhu abakwenzayo. Ngangithanda kakhulu ukuhlala namahhashi.
“Ngisho nasesikoleni samabanga aphezulu bengivame ukunyamalala ehostela labafundi kusempondozankomo, ngiyodlala nezingulube noma ngizihlalele ezintabeni nezinye izilwane,” kukhumbula yena.
Yize enesikhashana eqale ibhizinisi kodwa ziningi izingqinamba asebhekene nazo njengoba kuseyimboni egcwele abantu besilisa nasebekhulile.
“Uma ngidinga usizo ngokuthile, ngoba ngisemusha futhi ngisafunda, iningi labesilisa livame ukuzidlisa satshanyana lapha kimi. Babodwa abathi ngimuhle kakhulu ukuthi ngingenza umsebenzi wabesilisa kanti futhi ngike ngaba nesisebenzi ebesingethembekile nesinye ebesingaziphethe kahle singidelela ngenxa yeminyaka nobulili bami. “Akupheleli lapho, ngike ngafelwa yimfuyo, kwashoda amanzi okunisela izitshalo kanti futhi kuyabiza ukuthola odokotela bezilwane abazimele uma ngigulelwa imfuyo. Kukona konke, isifundo engisifundile wukuthi kumba eqolo ukuba nepulazi.”
Ukufuya wukufezeka kwephupho lasebuncaneni kuNksz uValashiya
Imvamisa kunzima ukuthola abatshalimali noma ukubolekwa imali yokuqala ibhizinisi kodwa akubanga njalo kuNksz uValashiya.
“Ngo-2020 ngibhalisele izifundo ezimfishane ze-poultry production,i-pig production ne-commercial crop production eCedara kodwa-ke ngenxa ye-lockdown zahoxiswa izifundo. Isibusiso esikhulu kube wukuhlangana nomuntu oqonda kabanzi ngesifiso sami sokuba nepulazi, nokuyilapho-ke ngithole khona imali engiyibolekile yokuqala ibhizinisi.
“EHlumisa Farm sineziklabhu ezicela ku-40, izinkukhu eziku-150, izingulube ezicela ku-50, izimbuzi eziwu-24 nezinkomo zohlobo lweBrahman ezine.
“Umphakathi waseRichmond uyangeseka kakhulu njengoba izinkukhu namaqanda kuthengwa ubuthaphuthaphu. Izitshudeni nabo bonke abangaziyo eThekwini bayangeseka kakhulu,” kusho uNksz uValashiya.
Le ntokazi iyaziqhenya ngokuba nesandla ekusizeni imindeni ukuthi ilale idlile njengoba iqashe abantu abayisihlanu. Esinye sezifiso zayo wukwakha amathuba omsebenzi angamakhulukhulu, ukuze ibe neqhaza ekwehliseni izinga lokungasebenzi kwentsha.
“Isifiso sami esikhulu wukuba nomhlaba wami wokulima nokufuya ukuze ngikwazi ukukhiqizela izitolo ezinkulu, amabhusha namajele ezweni lonke,” kuphetha uNksz uValashiya.